Toro-tady eo amin'ny tratra mandritra ny fitondrana vohoka
Manamarika ny tratra ao amin'ny tratra, mandritra ny ankamaroan'ny tranga - tsy azo ihodivirana ny tranga. Fa eto mba hampihenana azy ireo sy ny farafaharatsiny ary hitazona ny endriky ny tazom-bady taorian'ny nateraky ny zaza sy ny fampinonoana - ny asa dia azo atao.
Tratra ny vehivavy bevohoka
Ny fiovan'ny taovam-pananahana mandritra ny fitondrana vohoka dia mihodina. Izany hoe, amin'ny ambaratonga iray amin'ny maha-bevohoka, ny vehivavy rehetra dia manana fiovana ao amin'ny rafitra sy ny fisehon'ny tratra. Ny fitomboan'ny fanandramana indrindra amin'ny tratra dia hita amin'ny herinandro faha-7 amin'ny maha-bevohoka azy - avy eo amin'ny be dia be ny progesterone sy estrogen dia novokarina, nanentana ny fitomboany. Amin'ny roapolo herinandro, rehefa mahatratra volavolan-tena mahavariana ny tratra, dia miharihary ny marika famantarana. Hatramin'ny herinandro 22 isaky ny fitondrana vohoka, dia manomboka ny fitomboana vaovao eo amin'ny tratra. Angamba, ho hitanao fa tsy "mifanentana" ianao amin'ny solo-koinao vaovao.
Eny, raha miresaka momba ny hoditra malefaka eo amin'ny tratra - tsy manam-potoana fotsiny ny "mitombo" mifanaraka amin'ny trondro madinika. Mitombo tsikelikely ny kôlibandy, raha tsy mihoatra ny fahaizany. Rehefa reraka ny fetran'ny fahafaha-maivana - dia rovitra izy ireo, ary vokatr'izany dia marihitra marika hita eo amin'ny tratra mandritra ny fitondrana vohoka. Indrisy anefa fa ny isa sy ny haben'ny habeny dia ambaran'ny génétique sy ny taonany, saingy na dia izany aza, mba hampihenana na hisorohana ny bika aman'endriny dia ilaina ny manome tasy tsara mandritra ny fitondrana vohoka.
Ny fikarakarana ny nono dia mandritra ny fitondrana vohoka
Ny fiovan'ny taovam-pananahana mandritra ny fitondrana vohoka dia mitaky asa maika hatrany am-piandohana. Izy ireo dia hifantina amin'ny:
fampihenana ny isa maromaro eo amin'ny tratra mandritra ny fitondrana vohoka;
mihazona ny endriky ny tratra aorian 'ny fitondrana vohoka sy ny fametavetana.
Ny antony nahatonga ny endriky ny marika izay nofaritanay etsy ambony, noho izany, mba hiatrehana izany Amin'ity olana ity dia mila "manampy" ny fibraintsika ny collagen. Ny fahombiazan'ny fampiasana creams amin'ny collagen ho an'ny tratra nandritra ny fitondrana vohoka dia tsy voaporofo, fa ny vehivavy maro dia faly amin'ny vokatra. Amin'izao fotoana izao dia tena zava-dehibe ny fampiasana menaka voajanahary - oliva, mandro.
Mandritra ny fanasitranana ny tratra mandritra ny fitondrana vohoka, indrindra taorian'ny nisehoan'ny colostrum. Ampiasao ity vokatra mahavelona ity, fa tsy solika na menaka. Raha miaraka amin'ny fampiasana ny tratra ho an'ny vehivavy bevohoka dia manampy amin'ny fitazonana ny endriky ny tratra ireo fepetra ireo.
Tadidio ny hatsaran-tarehy hatsarana, izay tsy manasitrana ny tratra ary tsy miteraka ny fisehosehoana eo amin'ny hoditra. Misy taova vaovao mitatra toy ny tratra ao amin'ny vehivavy bevohoka. Tena manatsotra ny fiainan'ny vehivavy izy ireo.
Ho famaranana, azonao lazaina fa ny fikarakarana ny tenanao manokana, dia hanampy anao hanamaivanana ny mety hitrangan'ny marika eo amin'ny tratra mandritra ny fitondrana vohoka. Tiavo ny tenanao, ary salama!
Toetry ny fotony amin'ny fitondrana vohoka
Zava-miaina ara-batana sy tena izy
Ahoana no tokony hiheverana ny fanetsiketsehana ny foetus?
Mody mialoha ny fiterahana
Hofitol amin'ny maha-bevohoka
Afenina ho an'ny vehivavy bevohoka
Fandevenana manerantany ho an'ny vehivavy bevohoka
Miasa ho an'ny vehivavy bevohoka
Anemia amin'ny fitondrana vohoka - fitsaboana
Azo atao ve ny manao fihokoana mandritra ny fitondrana vohoka?
Herinandro 33 isaky ny fitondrana vohoka - inona no mitranga?
Ny labozia ao Geneferon amin'ny fitondrana tavy
Famenoana ny placenta
Moa ve ilay Suzane Vieira tsara tarehy 75 taona?
Ny fihinan'ny vary
John Travolta dia nitazona tao amin'ilay andian-tantara
Sakafo avy amin'ny tanimanga polymère
Ny fikolokoloana amin'ny saribao mafana
Toetran'ny Mistletoe ho fatiantoka
Inona no tanimanga tsara kokoa ho an'ny tarehy?
Hira fiderana ho feno
Katy Perry sy Heidi Klum tamin'ny fanokafana ny kintana Minnie Mouse tao Hollywood
Tewoline rubber boots
Manao ahoana ny setroka?
Ahoana ny fomba hanamboarana turkey iray amin'ny fitotoana ao anaty lafaoro?
Ny Gemini - hatramin'ny fahaterahana hatramin'ny fahaterahana
Persianina saka saka
Zavakanto mahaliana ho an'ny Taombaovao
Iza avy no ambony kokoa ho an'ny lakozia?
Ahoana no hambolena voankazo?
Ireo tantaran'ny sovietan'ny ankizy Sovietika